Repoblikan'i Kiprosy - Howling Pixel
Ny Repoblikan'i Kiprosy dia firenena mpikambana amin'ny Vondrona Eoropeanina arỳ antsinananan'ny Ranomasina Mediteranea.
Mpikambana amin'ny Vondrona Eoropeanina ilay silaka antsimon'ilay nosy. Misy mponina 1.300.000 no miaina ao. Ny grika no tena betsaka indrindra ao anatin'i Kiprosy iray mantolo, misy koa moa olona Britanika mipetraka ao anatin'ny base militaire, ary ireo basy militaire ireo dia amban'ny fitondran'ny Nosy Britanika.
Misy ny Repoblika Kipriôty dia ilay repoblika tena fantatrin'ny komonitia internasionaly. Manana fipetrahan'ny UN izy ary mpikambanan'ny Vondrona Eoropeanina (EU). Tokony manjaka ao anatin'ilay nosy iray mantolo izy kanefa izy eo antsimo ihany no tena manana hasinaIlay faritra avaratra dia miteny hoe Repoblika Tiorka ny Kiprosy (RTCN), izy dia ny Torkia ihany no mafantatra azy ; ny mpòninany dia ny kipriôty avy any Torkia, sy ny Tiorka avy amin'ny fanjanatany tamin'ny taona 1974. Tamin'ny taona 2004, ny fikambanana ny kaonferansa islamika nanomeha an'ilay firenena ilay staty nà mpijery amban'ny Firenena Tiorka ny Kiprosy. Ny Azerbaijana sy ny Pakistana ihany no mahita an'io firenena io otran'ny firenena.